jeudi, 29 octobre 2020 15:02
Ahmad Ahmad : Nirotsaka hofidiana fanindroany ho filohan’ny CAF
Nanao fanambarana ny alarobia 28 oktobra i Ahmad Ahmad fa kandida hirotsaka hofidiana ho filohan’ny Kaofederasiona afrikana ny baolina kitra na CAF. Ity teratany malagasy ity moa izao no filoha amperinasa, nitondra nandritra ny efa-taona ity vovonan’ny kitra ity aty Afrika. Namoaka fanambarana ny andron'io ihany ny federasiona malagasy ny baolina kitra na FMF, fa manolotra an’i Ahmad Ahmad ho kandida hofidiana filohan’ny CAF. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 29 octobre 2020 12:42
Covid-19 Barea vs Côte d’Ivoire : Maniry ny hanemorana ny lalao i Nicolas Dupuis
Taorian’ny fanambarana natoan’ny filoham-pirenena Frantsay omaly fa miverina amin'ny fihibohana indray ny ao Frantsa, noho ny firongatry ny coronavirus indray. Maneho ny ahiahiny i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na Barea. Ao Frantsa daholo, hoy izy, ny ankabeazan'ireo mpilalaon’ny Barea no milalao. Miisa 17 be izao izy reo. Mikatona anefa ny sisintany ao Frantsa ankoatra ny firenena Eropeana.
vendredi, 23 octobre 2020 09:35
Sary Nicolas Dupuis
Barea : Nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao nantsoina hiomana amin’ny fihaonana amin’i Côte d’Ivoire
Nampahafantarin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na Barea an’i Madagasikara, ireo mpilalao miisa 25 nantsoina hiatrika ny fampivondronana eto Madagasikara. Amin’ireo no hifantenana ireo 23 handrafitra ny ekipam-pirenena izay hikatroka amin’i Côte d’Ivoire, lalao mandroso sy miverina, izay hatao amin’ny novambra 2020. Niantso mpilalao vaovao roa ny mpanazatra, dia Randriamamy Mathias, izay mpiandry harato ao amin’ny PSG sokajy latsaky ny 20 taona, ny iray, ary i Loïc Lapoussin ny faharoa. Milalao any Belzika ity farany ary irakiraka ny toerany. (Sary Nicolas Dupuis) (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 21 octobre 2020 20:19
Fampivondronana Barea : Ho fantatra rahampitso ireo 25 mirahalahy voaantso handrafitra ny ekipam-pirenena
Nampahafantatra i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea an’i Madagasikara fa ny alakamisy 22 oktobra no hanolorany ny anaran'izy 25 mirahalahy izay voaantso handrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy amin'ny fampivondronana amin'ny novambra ho avy io, mialoha ny hiatrehana ny lalao mandroso sy miverina amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.
lundi, 12 octobre 2020 12:25
Kitra - Barea vs Etalons du Burkina Faso : Mbola baraingo ny handehan’ny lalao amin’ny TVM
Ho tanterahina any El Jadida - Maroc anio alatsinainy 12 Oktôbra 2020, amin’ny 7ora alina, ora eto Madagasikara, ny lalao ara-pirahalahiana, tafiditra amin’ny fanomanana ny CAN ifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Etalons - Burkina Faso. Ny fanapahan-kevitra handefasana mivantana na tsia ny lalao dia miankina amin’ny fifanarahana eo amin’ny federasionan’ny Baolina kitra Malagasy sy ry zareo Maraokana, fa tsy miankina velively amin’ny TVM, hoy ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Raha tonga amin’ny fifanarahana dia hafaliana ho an’ny Televiziona Malagasy sy ny ORTM ny mandefa mivantana ny lalao, hoy hatrany ny fanambarana. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 12 octobre 2020 11:11
Kitra : Barea vs Etalons Burkina Faso
Hotanterahina anio any Maroc ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan'ny Barea an'i Madagasikara sy ny Etalons Burkina Faso.
dimanche, 04 octobre 2020 17:40
Kitra – Lalao fanomanantena: Ho any Maroc ny Barea, hifampitsapa amin’i Burkina-Faso
Tsy raikitra ny fihaonana amin’i Ghana fa raikitra ihany indray kosa ny fifampitsapana amin’i Burkina-Faso, araka ny fanazavana nataon’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea momba ireo fanomanantena mandritra ny fampivondronana hatao manomboka ny 5 ka hatramin’ny 13 oktobra 2020 izao. Hanomboka any Luxembourg ny fampivondronana izay homarihina amin’ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan’ny Barea aminny Swift Hesperange, klioba diviziona voalohany ao Luxembourg ny zoma 9 oktobra 2020.
dimanche, 04 octobre 2020 16:38
Rosa Rakotozafy: Vehivavy voalohany filohan’ny CIGEPS
Madagasikara, amin’ny alalan-dRtoa Rosa Rakotozafy, no mitarika ny Comité InterGouvernemental de l'Education Physique et du Sport (CIGEPS) eo anivon’ny UNESCO. Nanohavaozina nandritra ny fivoriana ara-potoana ny 28 sy 29 septambra 2020 teo ny birao.Rosa Rakotozafy no filoha ho an’ny taom-piasana 2020 - 2021.Sambany no nisy filoha vehivavy hatramin’ny 1978 nisian’ny CIGEPS. Mitana andraikitra ambony eo anivon’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena i Rosa Rakotozafy. Tale jeneralin’ny fanatanjahantena ity farany. (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka fanambarana ny Grenoble Foot 38, klioba frantsay ilalaovan’i Jérôme Mombris fa mitondra Covid-19 ity farany taorian’ny fitiliana PCR natao azy. Misy mpilalao roa hafa sy mpitantana ny klioba ihany koa voa. Mpilalao isan’ireo nantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny fampivondronana sy nanao fanomanantena any Luxembourg mialoha ny hiatrehana ireo lalao roa mandroso sy miverina hifandonan’ny Barea amin’ny Elefatan’i Côte d’Ivoire amin’ny volana novambra i Jérôme Mombris. Vodilaharana ao amin’ny Barea izy, isan’ireo nandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy niatrika ny CAN 2019. (Jereo Sary Tohiny)
Araka ny fanambarana nataon’ny federasionan’ny baolina kitra ghanéanina tamin’ny alalan’ny tatitra ofisialy, dia ny ekipa nasionalin’ny Qatar no hifanandrina aminy ,amin’ny lalao ara-pirahalahiana izay atao any Antalya (Turquie) ny Alatsinainy 12 oktobra ho avy izao. Raha ny fandaharam-potoana izay voaray anefa, dia ny Barea an’ny Madagasikara no hifanandrina amin-dry zareo kintana maintin’ny Ghana amin’io daty io ihany. Mety ho any Maroc indray zany no atao ny lalao, ka hiverina amin'ny ekipan'ny Burkina Be indray no hifanandrinan'ny Barea.